Ugu yaraan 20 qof oo lagu dilay dagaal ka dhacay Sanaag oo u dhaxeeya labo beelood oo katirsan Somaliland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 20 qof oo lagu dilay dagaal ka dhacay Sanaag oo u dhaxeeya labo beelood oo katirsan Somaliland
Ugu yaraan 20 qof oo lagu dilay dagaal ka dhacay Sanaag oo u dhaxeeya labo beelood oo katirsan Somaliland
July 9, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Dagaalka ayaa u dhaxeeya labo beelood oo Isaaq ah. [Sawir Hore]
Ceerigaabo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu dilay dagaal beeleed u dhaxeeya labo qabiil oo katirsan Somaliland, sida ilo-wareedyo deegaanka ah ay sheegeen.
In ka badan 40 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay dagaalka, ilo-wareedyada ayaa intaas ku daray.
Dagaalka ayaa tan iyo horaantii asbuucaan ka dhacayay deegaano miyi ah oo hoos taga degmada Ceel Afwayn ee gobolka Sanaag.
Labada beelood oo katirsan beesha Isaaq ee Somaliland ayaa sanadihii lasoo dhaafay dagaalo kale oo dad badan ay ku dhinteen uu halkaas ku dhexmaray.
Masuuliyiinta maamulka Somaliland weli kama aysan hadlin dagaaladaan sababay khasaaraha badan.
December 12, 2019 Dagaal u dhaxeeya labo maleeshiyo beelood gudaha gobolka Mudug oo xabad joojin la dhex dhigay
Madxtooyada Soomaaliya oo beenisay wararka sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay badasho mowqifkeeda ku aadan kiiska horyaalla maxkamadda ICJ